आँखाको उमेर कति वर्ष ? – Everest Dainik – News from Nepal
आँखाको उमेर कति वर्ष ?
एजेन्सी । तपाइँलाई कसैले उमेरसाध्यो भनी फट्ट भनिदिनु हन्छ यति, तर अनि तपाइँको आँखा कति वर्षको भयो ? सहज उत्तर आफु जति वर्षको भइयो आँखा पनि उत्ति वर्षको नै भयो । तर होइन, तपाइको उमेर कलिलै भएपनि आँखा भने निकै पूरानो हो । तपाइँ हामी सबैको आँखाको उमेर ५० करोड वर्षको भैसक्यो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार जिवजन्तुको आँखा ५० करोड वर्ष पुरानो हो । वैज्ञानिकहरुले यो कुराको पुष्टि गर्नका लागि ७० करोड वर्ष पुरानो इतिहासलाई प्रस्तुत गरेका छन् । जुनबेला केवल एक कोषिय अमिबा, लेउ, मुगा तथा जिवाणुहरुको मात्र अस्तित्व थियो ।
वैज्ञानिकहरुले अध्ययनका क्रममा ओपसिन्स नामक कोषिमा ध्यान केन्द्रित गरे जो प्रकाशप्रति संवेदनशील हुन्छ । यो कोशिकाले जिवमा विस्तारै विस्तारै प्रकाशलाई पहिचान गर्न सुरु गर्यो । सोही कोशिका पछि आँखाको रुपमा विकशित भयो । जिवजन्तुमा पहिलोपटक ५० करोड वर्ष पहिले क्याम्ब्रियन युगमा आँखाको विकाश भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
ट्याग्स: eye, human health